Ngaba Kunzima Ukwenza Imali Ngokudityaniswa Kwentengiso? - Learn Expert Blogging
Ukuthengisa ngokudibeneyo konke malunga nokuthengisa imveliso. Uthatha imveliso phambi kwabaphulaphuli, Cacisa iimpawu- iyinzuzo kangakanani loo mveliso kubo? ukuba bayayithanda, bayathenga kwaye babuyele kwintengiso, ufumana ikhomishini. Lo ngumqondo olula wentengiso yokuhambelana.
Akunzima kodwa inkqubo elula yokwenza imali ngentengiso yokuhambelana ngokuthelekisa ezinye iindlela zokwenza ingeniso. Unokufumana umvuzo omkhulu ngomzamo omncinci. Inyaniso, Kuya kufuneka ujolise kubaphulaphuli abafanelekileyo, abantu abafuna ngokukodwa imveliso kufuneka babe banesidingo.
Abaphulaphuli abafanelekileyo babaluleke kakhulu. Abanye abantu bade bacofe abaphulaphuli kwaye bajolise kubo kamva ukuze bandise izinga lokuguqulwa. Ukucoca abantu ngumqondo ophuhlisiweyo obizwa ngokuba yifanele.
Izinto ezithile, Kuya kufuneka ukhathalele ukwenza lula ukusuka ekunzima ukwenza imali. masixoxe ngazo.
IKhomishini yokuDibana enikezela iinkampani
Ukujolisa kubaThengi abafanelekileyo
Yenza imali ngokuThengisa ngokuDibeneyo ngokuLula nangeMpumelelo
Kutheni kusiba nzima?
Kunye nabaphulaphuli abafanelekileyo, awunako ukwala ukubaluleka kwepesenti yekhomishini. Akukho mathandabuzo, Ndibone amakhulu aliqela abantu imizekelo engabo ivelisa ngaphezulu $2000 ngenyanga ngokulula namashishini amanyeneyo eAmazon.
Nangona kunjalo, ezinye iikhomishini ezinikezela iinkampani azikho ngaphaya kwabahlobo beAmazon. IAmazon ibonelela kuphela 8 ukuya 10% ubuninzi bekhomishini ngelixa, iinkampani ezinjengeClickbank zilungele ukuhlawula 60% Yekhomishini yemveliso. Ke, Kuya kufuneka ulumke ngelixa uchola uhlobo olululo lwemveliso kunye nenqanaba lekhomishini.
Yintoni uninzi lwabaqalayo abatsha abayenzayo- yenza nje iwebhusayithi yokubambisana ivelise umxholo ongaqinisekisiyo, kwiwebhusayithi yabo kwaye baqale ukukhuthaza. Abakuqondi ukubaluleka kwabathengi abafanelekileyo. Oku kuyinyani kwenza ukuba kube nzima ukwenza imali kwi-intanethi.
Ukujolisa ekunene yeyona nto ibalulekileyo kwimpumelelo yentengiso yokuhambelana. Ndibonile iimeko ezininzi xa abantu beveza imveliso yabo kwabo bantu bangenamdla.
Umzekelo -Xa umntu ekhangela isitulo kwaye ukhuthaza iifowuni eziphathwayo, le yinkcitha xesha, amandla, Umsebenzi onzima kwaye ngokuqinisekileyo uyakuphoxa kwaye wenza nzima ukufumana imali ngentengiso ehambelana nayo.
ndiyakhumbula, xa ndiqala ukuthengisa ngokubambisana ndenze ibhlog entle kakhulu. Iqela lethu sisebenza kunye ekwenzeni umxholo osemgangathweni kunye okholisayo. Siye saphanda banzi ngamagama aphambili okhuphiswano avela kwiSemrush, kwaye ukusuka kuGoogle kugqityiwe. Siphantse 40 + amanqaku okokoko 2 iinyanga.
Sijolise ngokupheleleyo kwiithagethi zezinto eziphilayo. Kuthetha xa umntu echwetheza “Eyona ilaptop iphantsi 1000 idola”. Kuya kufuneka batyelele inqaku lethu lebhlog njengegama “Eyona ilaptop iphantsi 1000 idola”.
Eyona nto siyenzayo yile- Sijolise kubaphulaphuli abafanelekileyo. Kuthetha ukuba umntu ukhangela ifayile ye- “ilaptop elungileyo phantsi 1000 Iidola”, kwaye sibakhonza ngokufanayo. Apha, kule meko, izinga lokuguqulwa lisephezulu kwezi ntsuku.
ukuba umntu othile ubuza ulwazi malunga neelaptop. Asithengisi okanye asibonisi enye into.
Abantu bathatha uncedo lwe-Facebook, Twitter, njl. ukuqhuba ukugcwala kwiwebhusayithi yabo kwimithombo eyahlukeneyo kwaye uphele ungathengisi. Isizathu kukuba- Itrafikhi oyifumana kumajelo asekuhlaleni, ngaphaya, ngubani owaziyo umntu okhangela ilaptop ethile kwizigidi zabantu.
Kodwa ukuba sithetha ngokukhangela kuGoogle, umntu othile uchwetheza igama eliphambili kwaye ufumana iziphumo ngokufaneleka okukhulu. Kungenxa yoko le nto inqanaba lokuguqula lihlala liphezulu xa ujolise kwiinjini zokukhangela kunaleyo yeendaba zentlalo.
Nangona kunjalo, ngekhe wale izinto ezimbini ezinokubakho. Inye kukujolisa abaphulaphuli abachanekileyo kumaqela eendaba ezentlalo. Unokhetho lokujoyina amaqela afanelekileyo kwaye wabelane nenqaku lakho elifanelekileyo kuwo.
Inketho yesibini kukuya kwiintengiso ezihlawulelweyo. I-Facebook ikuvumela ukuba ujolise kwiqela elithile lobudala kunye nabaphulaphuli abasekwe kumdla. Iya kubonisa intengiso yebhlog yakho kubasebenzisi kuphela abanomdla kwiilaptops (njengomzekelo). Kodwa nanku umda omnye kwakhona, asilazi ixesha lokuthenga kubo. Nokuba bathenga okanye bafuna ukuthenga okanye banomdla wokufumana ulwazi lobuchwephesha obuqhubayo.
Enye indlela yokwenza imali ngokuthengisa ngokubambisana ngokwenza i-funnels zokucofa. Cofa ifanele ngokusisiseko bacoca abantu abafuna le mveliso.
Into abayenzayo kukuya kwiintengiso ezihlawulelweyo okanye ukugcwala kwezinto eziphilayo. Xa umntu etyelela iwebhusayithi yabo, Babonisa onke amanqaku alo mveliso ukhuthaza ngakumbi kwaye bacele iinkcukacha ezisisiseko ngaphambi kokuqhubeka. Ngexesha lenkqubo, bathimba imeyile yakho, emva koko uye kwinqanaba lesibini emva kwesithathu. Emva kokugqiba inyathelo lesibini, bathuthela kwiphepha lokugqibela lokuhlawula.
Yintoni eyenzekayo ngapha, bahlula abantu abanomdla. Ukwenza icace ngakumbi, ukuba 100 Abantu batyelela iwebhusayithi ukuze bafunde amanqaku emveliso, kwikhulu, 30 abantu baya kugcwalisa iinkcukacha ezisisiseko, ngenisa imeyile yabo.
Ngaphandle kwe 30, kuphela 5 abantu baya kuhamba kwiphepha lokuhlawula. Banokuthi okanye bangangathenga kwangoko. Kodwa babonakalise umdla kumnini wewebhusayithi. Banomdla kuloo mveliso kodwa abakakulungelanga ukuhlawula ngalo mzuzu.
Ngoku kwixesha elizayo, eshiya bonke abantu abalikhulu, abaphulaphuli bakho abafanelekileyo ngabantu abahlanu kuphela. Ukuba ufumana ikhomishini efanelekileyo kwimveliso ethile. Ungayiphindaphinda loo khomishini nge 5. Ukuba ikhomishini yakho ingaphezulu $100 ityuwa, emva koko unokucinga ngokulula kulula kangakanani ukwenza imali ngentengiso yokuzibandakanya.
Umanyaniso lweNtengiso (kunye nendlela yokuqalisa)
Ngaba uMfundi unokufumana imali kwi-Intanethi
Next PostYimalini onokuyenza ngeGoogle AdSense?